Sheekada Filimka Nene Raju Nene Mantri: Rana Daggubati Wuu Kasoo Dhalaalay Doorkiisa Filimkaan Iinta Badan Leh | Filimside –
Sheekada Filimka Nene Raju Nene Mantri: Rana Daggubati Wuu Kasoo Dhalaalay Doorkiisa Filimkaan Iinta Badan Leh
Aug 13, 2017 - 3 Jawaabood
Kadib filimkii dunida ka yaabsaday Baahubali 2 kadib Rana Daggubati wuxuu la yimid filimka Telugu ah Nene Raju Nene Mantri oo uu hogaamiye ka yahay kuna jilaayo siyaasi.
Filimka Nene Raju Nene Mantri waxaa Rana la jileyso atirishada quruxda badan Kajal Aggarwal waxayna u ahayd markii ugu horeesay oo ay hal mashruuc kasoo wada muuqdaa.
Filimka Nene Raju Nene Mantri waxaa Director ka ah Teja waana filimka sedexaad ee sanadkaan 2017 la imaado atooraha awooda badan Rana Daggubati oo horey guul iyo amaan ku helay The Ghazi Attack iyo Baahubali 2.
Si Kooban Nene Raju Nene Mantri Muxuu Ku Saabsan Yahay:
Filimkaan wuxuu ku saabsan Jogendra (Rana) oo ah siyaasi hankiisa aad u sareeyo sidoo kalena awood xeelad isku darsaday waxaana inta badan looga hadlaa filimkaan Jogendra noloshiisa marxaladaha kala duwan oo ay soo martay.
Waa siyaasi, doqon ah mararka qaar, caqli badan, aan nixin sidoo kalena wax walbo hamigiisa ka horeysiiyo.
Sidoo kalena dhinac wuxuu yahay xaasle, wax jecel, dadka tixgaliyo sidoo kalena xaaskiisa Kajal Aggarwal marwalbo u ogolaado noloshiisa inay wax walbo ka ogaato.
Sidaa darteed halka Jogendra (Rana) joogo waa qasab inay joogto Radha (Kajal Aggarwal) oo ah qofka kaliya ee dhiiri galiyo talooyin kala duwana siiso.
Filimka Nene Raju Nene Mantri qaybihiisa dambe waxaa loo daawanaa Rana caqabadaha uu la kulmaayo iyo nooca siyaasada uu doonayo in shacabkiisa lagu hago.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkaan: Inaba caadi ma ahan bandhiga Rana la yimid weliba doorkiisa siyaasiga ah waana door uu si wacan xidigaan uga soo dhalaalay.
Rana xariif ayuu noqday madaama sanadkaan sedex waji oo kala duwan oo la yimid dhamaantoodana shaashada wacdaro ayuu ka dhigay, kani waa midkii korneelka dadaalka badnaa ku matalay filimki The Ghazi Attack sidoo kalena laadarkii awooda badnaa ee aan nixin Baahubali 2 ku jilay.
Kajal Aggarwal doorkeeda Radha waa mid wanaagsan laakiin wuu xadidan yahay madaama awooda oo dhan Rana gacanta loo galiyay, laakiin waa bilaaw wanaagsan isla shaqeynta labadaan oo si wacan shaashada ugu soo baxeen aadna isku caawiyeen dhanka jiliinka.
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan: Director Teja wuxuu u maleeeyay filimkiisa Rana iyo Kajal kaliya in loogu tala galay waayo sheekada isku xirkeeda waa mid aad u liidato sidoo kalena mowduuca uu doortay wuu ku jah wareeray sidii uu kaga dhigi lahaa mid sal adag.
Qaybta hore ee filimkaan sida loo diyaariyay waa heer sare laakiin qaybta dambe ayuu ka liitaa sidoo kalena waxa ku niyad jebinaayo ayaa ah in jilaayasha kale ee caawiyaasha matalayaan la siinin doorar adag taasi oo filimka xiiso usii yeeli laheyd.
Gunaanad: Filimka Nene Raju Nene Mantri waxaa loo daawan karaa Rana kaliya waayo Baahubali kadib kuma niyad jebin doono bandhigiisa laakiin waxa ku niyad jebinaayo ayaa ah sheekadiisa oo aad u liidato!
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan filimka Nene Raju Nene Mantri sheekadiisa waxay siiyeen 2.5/5 madaama filimkaan dhaliishiisa ay ka badan tahay amaantiisa.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Nene Raju Nene Mantri:
Waxaa Aqriyay: 682
waar zakariye zxp filimkii VIP 2 ee danush iyo kajol miyaan tiyaatarada la saarin xogtiisa noo soo gudbiya
Ok sxb maanta gelinka dambe inaan soo gudbino ayaa jadwalka noogu jirto insha Allah.
ok tnks zxp